Kuratidza zvinyorwa neelebheri bhaira
Kotel (Kesselkoppe muchiGerman) ipenga rakasarudzika rakagara mumakomo akakwirira eCzech emakomo eGiant. Iri munzvimbo yavo yekumadokero mudunhu reSemily muLiberec Region, iyo yepamusoro yepamusoro yazvo. Iri igomo regumi kwazvo muCzech Republic. Munguva yakapfuura yainzi zvakare Krkonoše uye Kokrháč.
Iro gomo, riri 5 km kumabvazuva kubva kune yakakurumbira ski resort Rokytnice nad Jizerou. Kune mamwe matanho akakosha munzvimbo dzakakomberedza, seLysá hora (1344 m), Harrach's Stones (1421 m) kana Vlčí Ridge (1140 m). Padivi rekumaodzanyemba kwakadziva kunokomberedzwa neChidiki uye Yakakura Boiler Pit, inowanzoiswa mungozi neavalches munguva yechando. Kufanana neye yese yeKrkonoše, iyo boiler yakaenzanisirwa neHercynian wrinkles uye inoumbwa zvakanyanya mica.
Iyo boiler inowanikwa nyore nyore kubva kuRokytnice nad Jizerou, kubva kune iyo tambo yemotokari inotungamira inosvika pamusoro peLysá hora, uye kubva ipapo iwe unogona kuenderera mberi nekudzika nzira yekubhoiler munzira tsvuku yekukwira nzira. Nekudaro, iyo peak pachayo haina kuwanikwa, sezvo iri munharaunda yekutanga yeKrkonoše…
Kotel Giant Makomo eakion foto
Iyo boiler (Kesselkoppe muchiGerman) ipamusoro rakakura riri mumakomo akakwirisa eCzech emakomo eGiant. Iri munzvimbo yavo yekumadokero mudunhu reSemily muLiberec Region, iyo yepamusoro yepamusoro yazvo. Kukwirira kwe1435 m pamusoro pegungwa kunoita kuti ive yegumi gomo refu pamusoro muCzech Republic. Munguva yakapfuura yainzi zvakare Krkonoše uye Kokrháč. Iro gomo rinowanikwa 10 km kumabvazuva kubva kune yakakurumbira ski resort Rokytnice nad Jizerou. Kune mamwe matanho akakosha munzvimbo dzakakomberedza, seLysá hora (5 m), Harrach's Stones (1344 m) kana Vlčí Ridge (1421 m). Iyo yakakomberedzwa neDiki uye Yakakura Boiler Pit kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, ayo anowanzoiswa mungozi neavalches munguva yechando. Kufanana neMakomo eGiant ese, iyo boiler yakaenzanisirwa neHercynian wrinkles uye inoumbwa zvakanyanya mica. Iyo boiler inowanikwa nyore nyore kubva kuRokytnice nad Jizerou, kubva kune iyo tambo yemotokari inotungamira kunenge kune pamusoro peLysá hora, uye kubva ipapo iwe unogona kuenderera mberi nekudzika nzira yekubhoiler ichitevedza nzira tsvuku yekukwira nzira. Nekudaro, iyo peak pachayo haina kuwanikwa, sezvo iri munharaunda yekutanga yeKrkonoše…